Isaayaas: Pirezidaantin Eertiraa obbo Isaayaas maaf Itoophiyaatti deebii'an laata? - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Yeman G. Meskel
Pirezidaantiin Eertiraa Obbo Isaayaas Afawarqi erga qilleensi nageenyaa biyyoota lamaa jidduutti bu'e as yeroo lammaffaaf Itoophiyaa dowwachuuf deebii'aniiru.
Dowwannaa obboo Isaayaas kan tibbanaa kanas kenneen haalawwan garaa garaa waliin walitti hidhan jiraatan illeen, odeeffannoon biyyoota lamaan irraa argamee garuu walitti dhufeenya cimsafchuuf ta'u ibsa.
Akka Obbo Fitsum Argaa barreessanitti, turtiin dowwannaa pirezidaanti Isaayaas Itoophiyaatti taasisan inni guddaan waliigaltee nageenyaa biyyoota lamaan jidduutti mallattaa'een walitti dhufeenya gama maraa cimsachuufii jedhaniiru.
Haaluma walfakkaatunis, ministirri komunikeshinii Eertiraa Obbo Yemaana Gabramasqal pirezidaantichi afferraa Ministira mummee Dr Abiyiin gara Itoophiyaatti qajeeluu isaanii ibsaniiru.
Kaayyoonni dowwannaa isaanis waliigaltee nageenyaa baatii Adoleessaa irratti waliigalamee fi dhimmoota waliin ta'an kan biraa irrattis akka mari'atan ibsaniiru.
Haa ta'u malee, qaamooleen dowwannoo pirezidaanti Isaayaas kana dhimma haala siyaasaa biyya keessaatiin walitti qabanis hindhabamne.
Turtii dowwannaa isaanitiinis pirezidaanti Isaayaas MM Dr Abiyiifi qondaaltoota mootummaa olaanoo waliin godina Jimmaatti Saqaa Coqorsaatii Fincaa'aa Saqqaa dowwachuun isaanii dhagahame.
Qondaaltoota dowwannicha irratti hirmaatan keessaa ministirri mummee Itoophiyaa duraanii obbo Haayilamaariyaam Dasaalanyi fi Ministirri haajaa alaa Dr Warqinaa Gabayyoo keessatti akka argaman maddeeni mirkanneessan.